Izindaba ze-forex | I-FXCC
Ikhaya / Imfundo & Ucwaningo / Ucwaningo / Forex News
Phila izindaba ze-Forex
I-FXCC izama ukugcina abadayisi bethu beFX baziswa njalo ngokushicilela: izindaba eziphukayo, imibono, amaqiniso, izibalo, izaziso njll esigabeni sethu sezindaba ze-FX. Sizokwazisa futhi, ngokusebenzisa iziteshi zethu zokuxhumana, ngokuxhumana nazo zonke izincwadi zethu.
Bonke abathengisi abanolwazi abazokwazi ukufakazela ukuthi izenzakalo ezinkulu zezomnotho kanye nezindleko zemali zomsindo wezinga eliphezulu. Kungakhathaliseki ukuthi uyisikali se-scalper; mhlawumbe besebenzisa izindlela zokuhweba ezenzakalelayo kanye nabacebisi bezazi ukuze bahwebe izimakethe ze-FX, okudingeka baphendule ngombani ngokushesha. Noma ungumthengisi we-swing; ngubani othatha indlela ethathwa ngokucatshangelwa ngaphambi kokuvala noma ukuguqula isiqondiso sezokuhweba, ukugcina phezulu kwezehlakalo zezindaba kuyisici esibucayi kakhulu lapho kuhweba i-FX.